Sharax qaabab Blu-ray Audio
> Resource > DVD > Blu-ray qaabab Audio Explained
Blu-ray la Timaadda oo tayo leh sameecadda audio . Haddii aad Waali by tayo sare leh waayo-aragnimo dhawaaqa, waxaad hubaal waa jecel audio Blu-ray. Waa mar kale kaydinta go'aan tayada. Dhawaaqa sameecadda qaadi doonaan tan oo meel ku disc Blu-ray, laakiin tani waxay hubaashii waa dhibaato u BD25 (25GB) iyo BD50 (50GB). Audio Blu-ray sidaas bixiyaa ilaa HD 7.1 channel codadka si aad u sheegi kartaa farqiga u xitaa haddii aadan haysan nidaamka xarunta warbaahinta u dhigma ama tiyaatarka guri.
Blu-ray qaabab Audio
DVD disc uu leeyahay tayada codka wanaagsan iyadoo la isticmaalayo rikoor Dolby koobay, Dolby Digital 5.1 ama DTS (Digital Theatre System). Blu-ray disc sidoo kale taageertaa, kuwaas oo ah qaabab audio lossy, laakiin sameecadda audio ka wanaagsan yahay kii audio DVD oo tayo leh. Inta badan Waxa jira saddex codecs audio sameecadda ah loo isticmaalo disc Blu-ray: PCM, Dolby TrueHD iyo DTS-HD MA.
PCM, gaaban Pulse Code isbedbeddelka, waxaa kaloo loo yaqaan LPCM, quman PCM, ama Uncompressed. Waxay baaq u tara asalka aan riixo kasta. Sidaa darteed, waxay qaadataa ilaa xaddi badan oo ah meel disc Blu-ray. Si kastaba ha ahaatee, waxuu xanbaarsan yahay saddex furimood, afar hareereeya oo channel saamayn inta jeer hooseeyo heerar sampling sare oo qoto dheer xoogaa.
Marka loo eego PCM, Dolby TrueHD bixisaa tayo la mid ah, laakiin waxay qaadataa meel yar ee disc Blu-ray. Si ka duwan heerka qayb joogto ah PCM ee, waa codec heerka yara variable ah, kaas oo bixiya 8 duwan channels buuxda 24-yara / 96 kHz audio. Dolby TrueHD waa codec khasab audio ee HD DVD. Inkasta oo inta badan cajalladaha Blu-ray encode doonaa audio la codec this, waxa uu noqday caan ah oo ka yar maalmahaas ka badan DTS-HD Master Audio.
Sida TrueHD Dolby, DTS-HD qaadataa ilaa meel yar ku disc ah Blu-ray ka badan PCM uncompressed. DTS-HD ka kooban yahay laba durdurrada: mid xal sare laakiin track lossy DTS iyo mid track DTS-HD Master Audio taas oo sameecadda ah. Sababtoo ah DTS-HD Master Audio u baahan badan inta laga shaqeynayo, waxa badanaa u muuqata in dhamaadka sare ee ciyaartoyda Blu-ray. Haddii aad leedahay nidaam dhawaaqa oo kala duwan, waxaad dooran kartaa dhiganta disc Blu-ray la DTS-HD Master Audio ah. Haddii kale, Macallimow DTS-HD ah Audio la suurto gal badali doono in PCM ama kaliya digital Dolby hor diraya qadanayo.
Sida loo Beddelaan WebM in DVD